Ronaldo Oo U Wareegaya PSG Halka Mbappe Uu U Dhaqaaqayo Real Madrid – Garsoore Sports
Ronaldo Oo U…
Ronaldo Oo U Wareegaya PSG Halka Mbappe Uu U Dhaqaaqayo Real Madrid
Haddii Ronaldo – oo sidoo kale lala xiriirinayo Madrid iyo Manchester United – uu ku biiro kooxda awoodda weyn ee Ligue 1 ee PSG, waxay sababi kartaa in Mauro Icardi uu ka tago Paris Saint-Germain isla markaana uu ka dego magaalada Turin iyo saldhiga kooxda Juventus. Sida ay ku waramayso Corriere dello Sport.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Mbappe uu mudnaanta siinayo tababaraha cusub ee Real Carlo Ancelotti. 22 jirkaan ayaa qandaraaskiisu dhacayaa xagaaga soo socda waxaana laga yaabaa inuu baxo inkastoo kooxda Parisians lagu soo waramayo inay qandaraas cusub usoo bandhigtay. Si kastaba ha noqotee, lacag badan ayaa weli loo baahnaan doonaa si loo dhammeysatiro heshiiskan.
Haddii uu u dhaqan galo heshiiskan, PSG ayaa la sheegay inay diyaar u tahay inay u dhaqaaqdo saxiixa Ronaldo si ay beddel ugu dhigti. 36 jirkaan ayaa la rumeysan yahay inuu doonayo inuu ka dhaqaaqo Turin kaddib xilli ciyaareed adag, tababaraha soo laabanaya Massimiliano Allegri ayaanan ka leexan suurtagalnimada uu xiddiga reer Portugal ku tagi karo iyadoo hal sano ay uga harsan tahay qandaraaskiisa Juve haatan.
Ka tegitaanka kabtanka Portugal waxay kicin kartaa heshiis kale, iyadoo Icardi uu usoo dhaqaaqayo dhanka Juventus.
28 jirkaan ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Bianconeri markii uu joogay Serie A iyi kooxda Internazionale.
Icardi ayaa ku lug lahaa 11 gool in ka badan 20 kulan oo Ligue 1 ah xilli ciyaareedkan, isagoo la dhibtoonayay dhaawacyo goosgoos ah waxaana loo dhaleeceeyay si weyn kaddib markii kooxdiisu ay ka hartay Champions League-ga.
Mustaqbalka xiddiga reer Portugal ee kooxda Juventus ayaa shaki weyn la gelinayay taniyo markii uu awoodi waayay in sannad cayaareedkii 3aad uu kooxda ‘Cajuusada’ ka caawiyo inay hantaan koobka Champions League-ga xitaa ay meel wanaagsan ka gaaraan tartanka iskabadaa kaasee xitaa horyaalka ayay awoodi waayeen inay ku guuleeystaan xilli-cayaareedkan iyagoo ku dhowaaday inay seegaan tartamada Yurub ololaha xiga.
Mbappe ayaa muddo dheer lala xiriirinayay kooxda LaLiga ka dhisan ee Madrid, haddii uu si dhaqso leh ugu dhaqaaqo Los Blancos wuxuu saameyn ku yeelan karaa halyeey Cristiano Ronaldo.
‘Sidee Ku Dhacdaa’ – Taageerayaasha Arsenal Oo Ka Falceliyay Waxa Koox Cadowgooda Ay Qorsheyneyso
Suuqa: Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala-iibsiga |03-Juun-2021